प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष, ओली सर्वाेच्च नेता | Everest Online News
प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष, ओली सर्वाेच्च नेता
Reporter: Everest Online News नेकपा एमाले, बाम एकता, बाम गठबन्धन, बामदेव गौतम, माओवादी केन्द्र
बामदेव गौतमले तयार गरे पार्टी एकताको खाका, प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष ओली सर्वाेच्च नेता
नेकपा एमालेका नेता बामदेव गौतम एमाले र माओवादी पार्टी एकताको लागि अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका छन् । पछिल्लो समय कार्यकर्ताबीच भएको भ्रमलाई चिर्नको लागि एमाले नेता गौतमले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई मान्दै खाका तयार गरेका हुन् ।
चुनावमा एक भएर जाने तथा पार्टी एकताको सुत्रधार मध्येका एक भनिएका गौतम पार्टी एकताका लागि नयाँ प्रस्ताव लिएर अगाडि आएका छन् । पद बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि अल्झिएको एकताका विषयमा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सार्दै पार्टी एकता गर्ने प्रयास गरेका हुन् ।
बामदेवको प्रस्ताव अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीसहित पार्टी एकतापछि सर्वोच्च नेताको पद पाउनेछन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षको पद दिने प्रस्ताव बामदेवले राखेको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
पछिल्लो समय पार्टी एकताका विषयमा अनेक चर्चा परिचर्चा भइरहँदा बाम एकताका मुख्य योजनाकार बामदेवले एकताको नयाँ सूत्र ल्याएका हुन् । बामदेवको यो प्रस्तावले एमालेमा भने फेरि तरंग ल्याउने बुझिएको छ ।
पद बाँडफाँडमा अलमल देखिएपछि प्रचण्डले शनिबारमात्रै गृहजिल्ला चितवनमा ‘नयाँ फड्को हान्न सक्ने’ जनाउ दिएको आसपासमा बामदेवले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको बुझिएको छ ।
कस्तो छ एकताको सम्भावना ? ?
यो एकताको विषयले मुलुकको राजनीतिलाई नै निकै गर्माएको छ । एकताका विषयमा एमाले र माओवादीबीच गम्भीर वार्ता नहुँदा समस्या अझ बढेको हो । बामदेवको यो नयाँ प्रस्तावले वार्ताको ढोका फेरि खोलेको छ ।
नेताहरुको बारीयता के हुन्छ ??
समस्या पदकै रहेको छ । ओलीलाई पहिलो र प्रचण्डलाई दोस्रो स्थानमा राख्दा पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुखको हैसियतमा रहिसकेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तेस्रो वरियतामा रहने देखिन्छ ।
तर यही स्थितिमा बामदेव र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ अनि कृष्णबहादुर महरा र रामबहादुर थापा बादलको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल छ । त्यसैगरी पार्टी एकता नभएका खण्डमा एमालेको नेतृत्व लिन तयार देखिएका वर्तमान महासचिव ईश्वर पोखरेलको अवस्था के हुने भन्ने अर्को प्रश्नसमेत खडा भएको छ ।
एमालेमा अहिले नयाँ आशंका जन्मिएको छ । एमालेको एउटा बृतमा प्रचण्ड र बामदेव मिलेर पार्टीलाई कब्जा गर्ने त होइनन् भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ ।
एमालेका अहिलेका दोस्रो वरियताका नेताहरुमा यो संसय पैदा भएको छ । उनीहरुले बामदेव र प्रचण्डको सेटिङ पहिलेदेखिनै रहेको र बामदेवको नयाँ प्रस्तावले पार्टीलाई नै कब्जा गर्न सक्ने शंकासमेत गरेका छन् ।